Ọrụ Visa - Ndị na-emepụta nde
Enyemaka Visa maka
Anyị na-ewetara ndị mmadụ n'otu n'otu, ezinụlọ, obere azụmaahịa, ụlọ ọrụ ụwa kachasị mma nke kachasị arụ ọrụ maka gị.
Soro anyị kerịta ihe ị chọrọ, anyị ga-edukwa gị ụzọ, gburugburu ụwa.
Ọrụ anyị bụ isi metụtara enyemaka enyemaka Visa
Ihe ngwugwu zuru ezu
Họrọ Mba maka Ọrụ Visa
Mba Visa di elu
Nlegharị anya na azụmahịa
A na-enye ndị ọbịa ala njem na Ajentina maka njem nlegharị anya na azụmaahịa 90 ụbọchị ha rutere, ọ dịghịkwa mkpa itinye akwụkwọ maka visa tupu ha abịa. yabụ gbaa mbọ hụ na ịchọrọ iji aka gị nyochaa ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya Argentine nke Argentina ma ọ bụ nke Consulate tupu ị mee njem ahụ, enwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ nke Argentinean Ministry of Home Affairs.
Only nwere ike itinye akwụkwọ maka visa a ma ọ bụrụ na ị debanyere aha na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na Argentina nke ngalaba ụlọ ọrụ mbata na ọpụpụ kwadoro nke Argentina. Ọ na-adịkarị mma ruo mgbe ọmụmụ ị na-anara akwụsịla, na enweghị ike ịmegharị gị.
Visa onye zutere ya
Visa a bụ maka ndị n’ebido ibi na Ajentina wee rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ Argentine nke edebanyere aha na ndị ọrụ mbata na ọpụpụ, ma nye ya ikike iwere ndị ọrụ si mba ọzọ. Ọtụtụ oge, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka visa a tupu ịmalite ma ọ bụ na ị batara na obodo a.
Onye ọ bụla nke gosipụtara na ego ga-akwụ ụgwọ ọnwa nke $ 8,500 ARS nke ruru ihe dịka $ 2,200 USD, ma kwe nkwa na itinye ego ya na akaụntụ akụ Argentine nwere ike itinye akwụkwọ maka visa a. Ọ bụrụhaala na onye anamachọ ahụ nwere ike iweta akwụkwọ gosiri na ego ha ga-enweta ga-aga n'ihu mgbe ha bi na Ajentina, ha nwere ike itinye akwụkwọ maka visa Financier.
Visa ezumike nka
Itinye akwụkwọ maka Pensioner visa, dịkwa ka maka Financier visa, mmadụ kwesiri inwe obere ego iji tinye akwụkwọ maka Pensioner visa chọrọ ka ị gosipụta ego opekata mpe kwa ọnwa nke $ 8,500 ARS (ihe dị ka $ 2,200 USD). Ekwesịrị itinye ego n'ụlọ akụ ndị Argentine ọ bụla.
Akwụkwọ ndị a na-ajụkarị maka itinye akwụkwọ n'ọrụ bụ:
Paspọtụ n’uhere dịkarịa ala ọnwa 6 mgbe ụbọchị mbata ahụ bịarutere
Ụdị ngwa ngwa
Anọ na-aga n'ihu na foto anọ ọgbara-ọkọlọtọ
Ndoputa tiketi njem njem
Inye ndozi ma ọ bụ leta nnabata n’aka enyi ma ọ bụ nke ezinụlọ Argentina bi
Kwụ applicationgwọ nke ụgwọ ngwa
Ihe akaebe banyere ego ma ọ bụrụ na onye na-achọ akwụkwọ nwere ike ịkwado ya
Akwụkwọ ndị ọzọ enwere ike ịrịọ maka gị gụnyere: asambodo ọmụmụ, asambodo alụmdi na nwunye mbụ, akwụkwọ ịgba alụkwaghịm mbụ (ọ bụrụ na ọ dị), akwụkwọ ọ bụla maka ịgbanwe aha, wdg. A ga-edegharịrịrị akwụkwọ ndị a niile wee jupụta na mba nke Ntinye ha, tụgharịrị gaa n'asụsụ Spanish ma ndị ụlọ ọrụ Argentine mezuru iwu.
Citizensmụ amaala European Union niile
Ndị jidere akwụkwọ ikike ngafe nke mba ndị a ga-eji Asambodo Njem nke Argentina nyere kama ịga visa mgbe ha na-eme njem:
Ekwesịrị ịkọba na maka mba Bolivia, Brazil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay na Venezuela usoro maka inweta ikike obibi nwa oge ka mfe, dị mfe ma na-enweghị nsogbu. Enwere ike ịme nke a site n'aka ndị nnọchi anya Argentinean ná mba ọzọ ma ọ bụ na Argentina. Akwụkwọ ikike ahụ na-adịru afọ abụọ, ma enwere ike ịmegharị ya.